Sawirro: Xildhibaan sabab yaab leh looga mamnuucay dhammaan Diyaaradaha ee.. - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Xildhibaan sabab yaab leh looga mamnuucay dhammaan Diyaaradaha ee..
Sawirro: Xildhibaan sabab yaab leh looga mamnuucay dhammaan Diyaaradaha ee..
India (Caasimada Online)-Warbaahinta Caalamka ayaa qortay in Xildhibaan kasoo jeeda dalka Hindiya uu garaacay Shaqaale diyaaradeed kadib markii la sheegay inay is maandhaafen.
Xildhibaankaani oo lagu magacaabo Ravindra Gaikwad ayaa 25 jeer Shaqaalaha ku garaacay dacas, ka dib markii uu kursi ka waayay qaybta hore ee diyaaradda oo ka kuraas qaalisan qaybaha kale ee diyaaradda.
Xildhibaankaani ayaa falka kadib laga mamnuucay in uu raaco 5 diyaaradood oo waawayn, waxaana lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay shaqaalaha Diyaaradii uu ku qornaa.
Xildhibaan Ravindra Gaikwad, ayaa falkaani geystay xili uu ku safri lahaa diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Air India.
Maamulka Shirkada Air India ayaa durbadiiba Xildhibaanka ka gudbiyay Dacwad, waxaana lasoo saaray amar ah inaanu ku safri karin dhamaan duulimaadyada hoos yimaada iisutagg diiyaaradaha ee loo yaqaanno FIA.
Diyaaradaha laga mamnuucay Xildhibaan Ravindra Gaikwad, ayaa waxaa kamid ah Shirkadaha xubnaha ka ah FIA oo ay kamid yihiin IndiGo, Go Air, Spice Jet iyo Jet Airways.
Diyaaradaha laga mamnuucay ayaa dhammaantooda saameyn weyn ku yeeshay Xildhibaanka waxa ayna u kala gooshan Gobolada iyo Caalamka.
Geesta kale, war qoraal ah oo ka soo baxay FIA ayaa sidoo kale loogu baaqay booliska inay tllaabo ka qaadaan Mr Gaikwad.